प्रस्तावित राजदूत सुवेदी भन्छिन्– ‘सबै जना जान्नेबुझ्ने भएरै राजदूत भएका होइनन् गएरै सिकिन्छ' - Himali Patrika
प्रस्तावित राजदूत सुवेदी भन्छिन्– ‘सबै जना जान्नेबुझ्ने भएरै राजदूत भएका होइनन् गएरै सिकिन्छ’
हिमाली पत्रिका २ जेष्ठ २०७८, 9:20 pm
काठमाडौँ । विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियुक्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार नाम सिफारिस गरेकोमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित सुमित्रा सुवेदीको विस्तृत परिचय भने हत्तपत्त फेला परेन । ‘म मोफसलमा बस्ने राजनीतिक कार्यकता हुँ, केन्द्रमा नभएकैले तपाईंले परिचय नपाएको होला’ भन्दै शनिबार झापाको दमकबाट फोन सम्पर्कमा आएकी ६० वर्षीया सुवेदीले आफूलाई ‘पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता’ भन्न रुचाइन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नैका लागि विद्यालय तथा क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न छाडेको बताउने सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी) राजदूतमा आफ्नो नाम प्रस्तावित भएपछि आफैं छक्क परेकी रहिछन् ।
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघको झापा जिल्लामा तीनपटक अध्यक्ष बनेकी सुमित्राले संघको केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल परिवार नियोजन संघमा पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्षको तहमा काम गरेकी छन् । दमकस्थित खानेपानी उपभोक्ता समितिमा समेत प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार रहेकी उनी जिल्लाको शिक्षा समितिमा सदस्य छिन् । प्रस्तावित राजदूत सुवेदीसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको संक्षिप्त फोनवार्ता :
तपाईंलाई कूटनीतिक जगत्‌का बारेमा केकति जानकारी छ ?
भन्नैपर्ने हुन्छ, अब यो कूटनीति मेरा लागि नयाँ फिल्ड हो । तर पनि देशको अन्तरसम्बन्धका बारेमा र द्विपक्षीय सम्बन्धहरू कसरी विकास गर्नुपर्छ भन्नेबारे म जानकार छु । सम्बन्ध विस्तारमा के–के सम्भावना छन्, नेपालसँग जोडिन सक्ने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय क्षेत्रहरू के–के हुन सक्छन् भन्नेबारे अवगत छु । म अर्थशास्त्रकी विद्यार्थी भएकाले सामान्यतया सम्बन्धको आयाम र अन्तरसम्बन्धबारे केही पढेकी छु ।
कूटनीतिको सारभूत पक्षबारे जानकार नभएकै अवस्थामा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध वा सहयोग–समन्वयको काम गर्न मुस्किल पर्छ कि भन्ने लाग्दैन ?काम गर्न सक्ने–नसक्ने भन्ने कुरा मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा पनि भर पर्छ । यता आफ्नो घरमा राजनीतिक स्थिरता नभईकन बाहिरबाट कुनै पनि मुलुकले लगानी गर्न वा सहयोग परिचालन गर्न कठिनाइ मान्छन् नै ।
अस्थिरताको अवस्थामा कुनै पनि प्रोजेक्ट दिन अरू मुलुक सशंकित हुन्छन् नै । कुनै पनि काम गरिसकेपछि जस उनीहरूले पनि लिन खोज्छन्, यो स्वाभाविक छ । त्यो जस लिने सम्भावना भएन र योजना लागू गर्न सक्ने सम्भावना भएन भने अस्थिरतामा लगानी गर्नुको अर्थ केही छैन भन्ने स्वभावत: भइहाल्छ । यस कारण काम गर्ने/नगर्ने कुरामा कुनै राजदूतलाई दोष दिनुभन्दा पनि घरभित्रकै राजनीतिक स्थायित्वलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । फेरि कूटनीतिक स्थिरताका लागि पनि राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व चाहिन्छ नै ।
तपाईं एउटा समृद्ध युरोपेली मुलुकमा राजदूत भएर जाने सूचीमा पर्नुभएको छ । भाषागत कठिनाइ र अरू शिष्टाचारका पक्षबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
मान्छे जन्मँदैखेरि केही पनि जानेर वा बुझेर आएको हुँदैन । सबैथोक सिकेर जान्ने कुरा हो । सधैंभरि यही लोकल ठाउँमा बसेर यहीँ वरपरको मात्रै कल्पना गरेर पनि हुँदैन । फेरि सबैजना जान्ने–बुझ्ने भएर मात्र राजदूत बनेर गएका त होइनन् होला । एउटै मान्छेमात्रै कुनै मुकाममा राजदूत भएर बसिरहने कुरा पनि आउँदैन, नयाँ मान्छे पनि जानैपर्छ । कतिपय कुरा गएरै सिकिन्छ । डेनमार्क भनेको मानवअधिकार तथा विकास समृद्धिका अनेक आयामका कुराले चिनिएको मुलुक हो ।
त्यस कारण सिक्नमा केही समस्या हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म भाषाको कुरा छ, भाषा भनेको आफूले बोलेको कुरा अरूलाई बुझाउन सक्ने माध्यम मात्रै हो । बुझाउन सक्ने कन्फिडेन्स हुनुपर्‍यो, त्यो मसँग छ । अंग्रेजीमा फरर्र बोल्दै जाने कुराहरू भनेको सिक्दै जाने कुरा पनि हो । मेरा कति कमजोरी होलान्, मसँग कति ‘कन्फिडेन्स’ पनि होला । तर, यत्ति हो, दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा केही काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास भने मसँग छ ।
राजदूत छनोट र नियुक्तिमा परराष्ट्रले एउटा ‘क्राइटेरिया’ बनाएको हुन्छ, छ पनि । तर तपाईंको हकमा कहीँकतै नातावाद–कृपावादका कारण यो स्थानमा आइपुग्नुभएको भन्ने टीका–टिप्पणी सुरु भएको छ नि ?
अब कसले, के–कसरी बुझ्छ, म त्यो भन्न सक्दिनँ । तर सम्बन्ध त जसको जहाँ पनि हुन सक्छ । त्यसै भन्ने हो भने यहाँ (दमक) मेरो घरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर ५ सय मिटर मात्रैको दूरीमा छ । हेर्नुस्, २०३६ सालमा धरानमा क्याम्पस पढ्दैदेखि म विद्यार्थी आन्दोलनको राजनीतिमा होमिएकी हुँ । म आफ्नै राजनीतिक योगदान, पहिचान र करियर लिएर अगाडि बढेकी महिला हुँ । बरु, यस्तै अनेक सम्बन्धका कारण मेरो योगदान ओझेलमा परेको हो भन्ठान्छु म ।
कुनै सम्बन्धका कारण मैले कतै ठाउँ नपाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी राजनीतिमा लागिरहनेका हकमा के हुन्छ भने बेलाबेलामा कुनै पदका लागि नाम चल्छ, फेरि सेलाउँछ । फेरि कतै नाम आउँछ, फेरि ब्याक हुन्छ । कतै मसँग सम्बन्धको कुरा आउँछ, कतै मेरो मोफसल बसाइको । यो सबै खेप्दै–खेप्दै म यहाँसम्म आएकी हुँ । मेरा लागि पनि अहिलेको निर्णय आकस्मिकझैं छ । जे होस्– केन्द्रको नजरमा परिएछ भन्ने भएको छ । यस्तो निर्णय र प्रस्तावनामा विरोध भएन भने फेरि रमाइलो पनि हुँदैन ।